कसरी सम्भव भइरहेछ तमोरको पानी गाउँ–गाउँमा वितरण गर्न ? (फोटो फिचरसहित) « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: १६ माघ २०७८, आईतवार १८:०२
पाँचथर । पहिले तमोर नदीको पानी घर–घरसम्म वितरण गर्ने काम कसरी सम्भव होला भन्ने सबैको चासो र चिन्ता थियो । तर अहिले आम कुम्मायक गाउँपालिकावासी सेवा लिन पाउँदा आनन्दित छन् । कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं. ५ स्यावरुम्बाको लुबुघाटबाट तमोर नदीको पानी १४३४ मिटर उचाईमा रहेको यासोक बजारसम्म पुर्‍याई खानेपानी वितरण भइरहेको छ । विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिको प्रयोग गरी लुबुघाटबाट विभिन्न सात स्थानमा रहेका पम्पिङ स्टेशन (ट्याङ्की)हरुको सहायताले डाँडासम्म पानी पुर्‍याइएको छ ।
तर पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा सञ्चालित पम्पिङ खानेपानी आयोजना नियमित प्राविधिक जटिलताका कारण प्रभावित बनेको छ । यद्यपि आयोजनाको सेवा भने नियमित छ । कुम्मायक गाउँपालिकाका वडा नं. १, ३, ४ र ५ मा सञ्चालित ‘यासोक वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना’ मा नियमित प्राविधिक समस्याहरु देखिने गरेका हुन् ।
प्राविधिक समस्याले खानेपानी वितरणको कार्य जटिल र महङ्गो बनेको छ । आयोजनाअन्तर्गत तमोर नदीको पानी सात वटा पम्पहरुको सहायताले यासोक डाँडासम्म ल्याई वस्तीहरुमा वितरण गरिएको छ । तर पम्पहरुमा नियमित समस्या आउने, पानी चुहावट नियन्त्रण गर्न कठिन पर्ने, उपभोक्ताहरुबाट मासिक सङ्कलन हुने शुल्कको रकम आयोजना सञ्चालन गर्न पर्‍याप्त नहुने लगायत समस्या देखिएका छन् ।
उपभोक्ता समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष मेघराज निरौलाका अनुसार चाप नियन्त्रण (ब्रेक प्रेसर) ट्याङ्कीमा प¥याप्त मात्रामा पानी नरोकिँदा समस्या देखिएको छ । यस्तै घर–घरमा जोडिएका धारा र अन्य ट्याङ्कीहरुमा समेत पानीको चुहावट हुने गरेको छ । चुहावटले एकातर्फ उपभोक्ताका घरमा भनेजति पानी पुर्‍याउन समस्या पारेको छ भने अर्कातर्फ पानीलाई वितरणको अवस्थासम्म पुर्‍याउन विद्युतको खर्च बढाउने गरेको छ ।
यस्तै सात स्थानमा रहेका पम्पहरु जलिरहने समस्या देखिएको छ । “एउटा पम्प जल्दा खानेपानी वितरण एक साता अवरुद्ध हुन्छ”, उपभोक्ता समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, “एउटा पम्पको मर्मतमा न्यूनतम रु. सात लाख खर्च हुन्छ । हामी (उपभोक्ता समिति)सँग दक्ष प्राविधिक नहुँदा पम्प मर्मत गर्न कहिले झापा त कहिले भारत पुर्‍याउनु पर्छ ।” ठूलो चापसहितको पानी उकालोतर्फ फाल्दा पम्पहरु छिटोछिटो जल्ने गरेको आयोजनामा कार्यरत प्राविधिकहरुको भनाई छ ।
आयोजना सञ्चालन निकै खर्चिलो समेत देखिएको छ । आयोजनामा मासिक न्यूनतम रु. आठ लाख सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्ने गरेको छ । गत महिना विद्युतको महशुल मात्रै रु. पाँच लाख २७ हजार उठेको थियो । सरकारले छुट दिएकाले मात्रै महशुल कम देखिएको हो ।
छुटविना आयोजनाको मासिक विद्युत महशुल रु. १२ लाखभन्दा बढी हुने गरेको छ । तर सोही महिना उपभोक्ताबाट रु. दुई लाख ८५ हजार शुल्क उठेको छ । “मासिक रुपमा घाटा भइरहेको रकम कुम्मायक गाउँपालिकाको सहयोग तथा उपभोक्ता समितिले सङ्कलन गरी बचत रहेको रकमबाट पूर्ति हुँदै गर्दै आएका छौँ”, निरौलाले भन्नुभयो ।
आयोजना हेर्ने संघीय खानेपानी आयोजना इलामका प्रमुख सुरतलाल चौधरी भने आयोजनामा देखिने गरेका प्राविधिक समस्या हल गर्न कार्यालय लागिपरेको वताउनुहुन्छ । “पम्पहरु जलिरहने समस्या समाधानका लागि स्टेपलाइजर खरिद गरी उपलब्ध गराइएको छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “स्टेपलाइजर फिट (जडान) भइसकेका छन् ।” कार्यालयको आग्रह आयोजनाको निर्माण कम्पनी ले थप सात वटा पम्पहरु समेत खरिद गरी उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समस्या समाधानका लागि उपभोक्ता समितिले ३०० स्थानमा प्रेसर रिलिज (हावा निकाल्ने) मेसिन राख्न लागेको छ ।
खानेपानी विस्तार अझै अपूर्ण
उपभोक्ता समितिका अनुसार हालसम्म कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं. १, ३, ४ र ५ का २३०० भन्दा बढी घरसम्म खानेपानी विस्तार भएको छ । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार ३०४३ घरसम्म खानेपानी विस्तार हुनुपर्ने हो । कतिपय उपभोक्ताले अन्य स्रोतबाट समेत खानेपानी उपभोग गरिरहेकाले आयोजनाको पानी जोडेका छैनन् । कतिपय स्थानमा भने अझैसम्म खानेपानी विस्तार हुन सकेको छैन् ।
उपभोक्ता समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष निरौला डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार वितरणका लागि प्रयोग हुने पाइपको मात्रा २३०० घरमा धारा पु¥याउँदै सकिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले थप पाइप नदिएको वताउनुहुन्छ । विस्तारको काम रोकिएपछि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले थप १५ हजार मिटर पाइप उपलब्ध गराएको थियो । “तर त्यसले समेत अपुग हुने अवस्था छ । त्यसले झण्डै ३०० घरसम्ममात्रै खानेपानी पुग्छ”, निरौलाले भन्नुभयो ।
आयोजना कार्यालयका प्रमुख चौधरी भने आफू उक्त कार्यालयको प्रमुख भई आउनुअघि नै पानी उपभोग गर्ने घरसंख्या करीब २५०० रहेको प्रमाणित भएको पाएको वताउनुहुन्छ । “घर संख्या त्यत्ति नै हो भनेर भेरिएसन भएकाले त्यत्तिकै लागि पाइप आएको हो”, चौधरीले भन्नुभयो, “डीपीआरअनुसार सबै घरमा पानी पुर्‍याउन थप पाइप दिँदै छौँ । उपभोक्ता समितिले समेत १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएकाले थप काम पनि हुन्छ ।” ३०४३ घरकै लागि मिटर र फिटिङका सामग्री उपलब्ध गराइएको चौधरीले वताउनुभयो ।
उपभोक्ता समिति भने निर्माण कम्पनीले अझैसम्म आयोजना समितिलाई हस्तान्तरण नगरेको तथा खानेपानीको विस्तारमा सहयोग नगरेको वताउँछ । “निर्माण कम्पनी भाग्न खोजेकाले आयोजनालाई चुस्त अवस्थामा पुर्‍याएर मात्रै अन्तिम निकासा दिन कार्यालयलाई भनिरहेका छौँ”, उपभोक्ता समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो । यस्तै उपभोक्ता समितिसँग सवारी साधन नहुँदा काम गर्न झनै कठिन परेको, प्राविधिक जनशक्ति नरहेको निरौलाको भनाई छ ।
तर, नियमित छ खानेपानी, गाउँपालिकाले गरिरहेछ भरथेग
नेपाल सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको कुम्मायक गाउँपालिकामा तमोरको पानी यासोकको डाँडासम्म ल्याई वितरण थालिएपछि जनजीवन धेरै सहज बनेको छ । आयोजनामा नियमित प्राविधिक जटिलताहरु आएपनि समितिले नियमित खानेपानी वितरण गरिरहेको छ । “अहिले खानेपानी नियमित आपूर्ति भइरहेको छ । ठाउँ र अवस्था हेरेर दैनिक वा दुई दिनमा एक पटक खानेपानी वितरण गर्छौं”, निरौलाले भन्नुभयो, “आयोजनाको नियमित सञ्चालनमा कुम्मायक गाउँपालिका र संघीय खानेपानी आयोजना कार्यालय इलामले सहयोग गरिरहेका छन् ।”
विगतमा मुख्य प्रशारण लाइनको काम सम्पन्न भई करीब २००० घरसम्म खानेपानी विस्तार भएपछि वि.सं. २०७६ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन भएको थियो । खानेपानीका मुहान सुक्दै गएपछि साविकको यासोक, स्यावरुम्बा र रानीगाउँ गाविसका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट वृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । यी गाविसहरुलाई सरकारले वि.सं. २०६८ सालमै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको थियो । रु. ५१ करोड ३० लाख २० हजारको लागतमा निर्माण भएको आयोजनाबाट १३ हजार २६६ स्थानीयवासी लाभान्वित हुने सरकारी प्रक्षेपण छ ।
कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं. ५ स्यावरुम्बाको लुबुघाटबाट तमोर नदीको पानी १४३४ मिटर उचाईमा रहेको यासोक बजारसम्म पुर्‍याई खानेपानी वितरण भइरहेको हो । विद्युतीय पम्पिङ प्रविधिको प्रयोग गरी लुबुघाटबाट विभिन्न सात स्थानमा रहेका पम्पिङ स्टेशन (ट्याङ्की)हरुको सहायताले डाँडासम्म पानी पुर्‍याइएको हो । आयोजनाको प्रशारण लाइनतर्फ मुहानमा एउटा ट्याङ्की, पम्पिङ स्टेशन साट वटा, खोल्सा क्रसिङ र कार्यालय भवन एक/एक वटा, पानी ट्याङ्की ११ वटा र गार्ड घर १० वटा निर्माण भएका छन् । तमोर नदीबाट डाँडासम्म पानी ल्याउने प्रशारण लाइन १७.४ किलोमिटर रहेको छ भने वितरण पाइपलाइन १९२.५१ किलोमिटर छ । वितरण लाइनतर्फ अग्नि नियन्त्रक १५ वटा, खोल्सा क्रसिङ ३४ वटा, भल्भ च्याम्बर ११५ वटा रहेका छन् ।
यी सबै संरचना दुई वर्षअघि नै निर्माण पूरा भएका थिए । आयोजना सञ्चालनका लागि यासोक बजारबाट लुबुघाटसम्म ८.८ किलोमिटर ११ केबी विद्युत प्रशारण लाइन समेत विस्तार भएको छ । आयोजनाको प्रशारण लाइन प्रेरा स्वामी नारायण जे.भी. ललितपुर तथा वितरण लाइन कन्काई–महादेव खिम्ती–स्वामी नारायण जे.भी. सुनसरीले निर्माण गरेका हुन् ।